Top 3 Lugood ee kaabta Extractors / Daawadayaasha
Mid kasta oo naga mid ah waxay leeyihiin badan oo data waxtar leh oo muhiim ah oo files ee taleefannada our. Bal qiyaas siday u adag tahay lahaa haddii aadan soo saaro kartaa files gurmad marka aad qalab waxaa burburay ama laga badiyay. Waa hagaag, in ay ahayd goobta dhawr sano ka hor ay Gordhaw Kadhoofaan isticmaala. Laakiin nasiib wanaag haatan aad leedahay tiro ka mid ah Softwares xisbiga saddexaad (extractors / daawadayaasha) taas oo kaa caawin kara inaad soo saaro iyo kabsado aad files gurmad dhacdo in wax kasta oo khasaaro ama waxyeello ah ee files iyo sidoo kale u arkaan in aad files gurmad. Ugu sareeya saddex Lugood gurmad extractors / daawadayaasha waa:
No 1: Wondershare Dr.Fone ee macruufka
Wondershare Dr.Fone Ee macruufka waa mid ka mid ah app ugu fiican ee soo kabsaday files, fariimaha, xiriirada, sawirada, videos aad iwm ka iPhone, iPad iyo qalabka macruufka kale. Waxa ay taageertaa oo dhan versions of software macruufka iyo waxay ka caawisaa in aad ka bogsato files xitaa haddii uu lumo ama la OS oo dhan qalab aad uu kharribeen sabab u ah arrimo dhinaca farsamada ah qaar ka mid ah.
Waa arrin aad u fududahay in la isticmaalo iyo ka kaaftoomi habka lacag la'aan ah tallaabooyinka ku koobnayn.
Waxaa laga heli karaa labada MAC iyo Windows madal.
Waxay leedahay user interface saaxiibtinimo taas oo ka dhigaysa in ay aad u fududahay in user xitaa bilow ah.
Waxaa kaloo loo isticmaali karaa si uu u xaliyo OS nidaamka of qalab aad ka.
Links: Download Windows maxkamad version Download Mac maxkamad version
No 2: Rescue Phone
Rescue Phone waa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee la heli karo extractors gurmad maanta ee macruufka isticmaala. Labada Available on Windows iyo Mac, waxa ku siinayaa dabacsanaan ah lagu soo saaro in ka badan 20 nooc oo kala duwan oo files ka qalab macruufka ah. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad soo kabsado xogta sida Guda wac, fariimaha, sawiro, videos, camera oo duudduuban, xogta app iwm
Waxay kuu ogolaanaysaa inaad soo saaro hayaan ka duwan iCloud xitaa haddii la Windows XP.
Qaabab dhowr ah ayaa lagu taageeraa si loo badbaadiyo dhoofiyo macruufka gurmad files.
Waxaa laga heli karaa labada Windows iyo Mac oo kuu ogolaanaya in aad ka qalab aad u dhoofiyaan xogta si toos ah.
Waxay kuu ogolaanaysaa inaad soo ceshano xogta 3 siyaabood oo kala duwan oo nabad iyo xasilooni.
Links: Halkan Download
No 3: iPhone shawladda kaabta
Waa software aad u fiican si aad u hesho macluumaad gurmad iyo Macdan xogta lumay, dhammaan qalabka macruufka. Waxa kale oo uu leeyahay dual madal on Windows iyo Mac. Waxay leedahay Windows XP taageero gurmad ah oo u baahan password ammaanka fiican.
Waxay leedahay dual labada on Windows iyo Mac madal.
Waxay leedahay lo password hab ilaaliyo gaarka ah ee amniga ka wanaagsan.
Waxa ay u ogolaataa inay soo saaro xogta labada ka hayaan qalab macruufka iyo hayaan iCloud.
Waxa uu leeyahay user saaxiibtinimo interface.
Talooyinka 3 Extractors kaabta Lugood
Taageerayaan OS Rate Success Benifits Fududaato in la isticmaalo
Aad loo jecel yahay
Rating Celceliska 4.5 / 5
Ka sokow soo kabashada data, waxay kaloo ka caawisaa si uu u xaliyo arrimaha nidaamka macruufka sida cad Apple, shaashadda madow, hab-kabashada, iwm Aad u fududahay in la isticmaalo iyo user saaxiibtinimo.
Rating Celceliska 4/5 < Sidoo kale u ogolaanaya in ay soo kabsadaan taariikhda Skype kaga imaanayo Lugood Easy in ay isticmaalaan fursado kabashada badan.
iPhone kaabta shawladda
Rating Celceliska 3.5 / 5
Waraaqda xog dheeraad ah oo ka soo gurmad Lugood Aad u fududahay in la isticmaalo.
Raadi a shawladda gurmad caanka ah samayn kara wax badan oo shaqo hal mar. Wondershare Hogaamiyay maxaa yeelay waxa ay qaban karaan Koox ka mid ah falalka iyo halka aad ned laga yaabaa inaad bixiso si ay u isticmaalaan qaababka joogtada ah ee caymiska, waxaad u hesho wax badan oo dheeraad ah si waslad khafiif ah oo badan aad si caadi ah samayn lahaa wax kasta oo gurmad shawladda. Hadda, badbaadinta xogta aad ayaa kaliya heshay badan oo dhan fudud.
Ma kaabta Lugood Photos?
Sida loo dayactir Dhibaatooyinka ugu badan ee Lugood
3 Siyaabaha la yareeyo awoodda Lugood Library Your
> Resource > Lugood > Top 3 Lugood ee kaabta Extractors / Daawadayaasha